Khabiiro gaar ah oo khabiir ah "Game of Thrones" ayaa muujinaya sida ay u keenaan jajabka noolaha - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Takhasusaha gaarka ah "Game of Thrones" ayaa muujinaya sida ay u keenaan ekaamyada nolosha - BGR
Mark Spindler waa magaca rasmiga ah ee shirkadda saameynta gaarka ah leh Pixomondo waa kormeeraha isuduwidda, taas oo macnaheedu yahay inuu isagu mas'uul ka yahay qabashada waxyaabo kala duwan oo VFX iyo sixir iyo iyaga oo isu geeynaaya isku dhafan. Waxay u egtahay shaqo aad u gaaban oo aad u farsamo. Laakiin markaad eegto shaqada uu isaga iyo asxaabtiisu ay ka danbeeyaan dhacdooyinka tan iyo xilliyadii ugu dambeeyay Game of Thrones Saddexda dabayl ee neefsashada ee taxanaha taxanaha ah ee ay ka caawiyeen inay tiro badan oo nool iyo cabsi dhab ah oo shaqeynaya, taasina waxay soo baxdaa in ka badan wax badan oo farsamo.
Tani waa dariiq dheer oo aad u tagto - kooxda Pixomondo, mid ka mid ah shirkadaha 12 ee ku lug leh dhinacyada kala duwan ee Dhibaatada Gaarka ah ee Gaarka ah si loo yareeyo fikradda khiyaaliga ah sida maskaxdu, dhab ahaantii waxay u baahan tahay tayada hawsha xanuunka ka hor intaysan xataa bilaabin kombiyuutarka. Tani waxay ku lug leedahay raadinta xayawaanka dhabta ah ee la midka ah masjidka, sida xamaaradaha sida lakabyada iyo farasyada (marka ugu horeysa ee lagu baro miisaanka iyo maqaarka, tan labaad ee baqyada). Kooxda Pixomondo waxay fiirisay fiidiyowga iyo faahfaahinta dhabta ah ee aduunka, iyaga oo si gaar ah u fiirinaya sida xayawaankani u dhaqmaan una dhaqmaan jawigooda dabiiciga ah si ay si habboon u dhaqaajiyaan miisaanka, dhaqdhaqaaqa, murqaha iyo meydka Drogon, Rhaegal iyo Viserion - saddexda cabsi ee muusiga waxaa ka mid ah hooyadooda cad cad, Daenerys.
Laakiin taasi ma joogsato. In dunida dhabta ah, waxa jira xoolo u lahayn in ay wax ka barato cuna dabka, sidoo kale, si ay u fahmaan xaqiiqo ee wajigan, kooxda Pixomondo falanqeeyay sida darbo flamethrower tufi, oo ay ku jiraan Sidii dabku u caydhiyey oo wax walbay u leexdeen. Kanu waa shuqulkii u cabbudhinayo fikirka hal abuur leh ayaa u qoondeeyey oo ay noqoto mid aad u adag sida dawacooyinku ay ahaayeen kuwo horumar, ka ilmaha yar in ay dhamaadka xilli ciyaareedkaan ka 1 dugaagga laga cabsado ee Joogaba, Tacaddi in aynu arki doonaa ka dib. koritaanka ayaa sidoo kale soo beegantay miisaaniyadda la taaban karo HBO waayo show ah in xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay - taas oo ka bilaabanayso Sunday - ayaa noqday dhagax waa taaban dhaqanka pop.
"Dabcan, waa dareen," ayuu yiri Spindler BGR ee xafiiska Pixomondo ee Frankfurt, Jarmalka, oo ku saabsan dhammaadka soo socda ee taxanaha iyo shaqada ee kooxdiisa for Kormeeraha VFX ee HBO, Joe Bauer iyo VFX Producer Steve Kullback. Labaduba waxay mas'uul ka yihiin saameynta muuqaalka ee taxanaha oo dhan tan iyo xilliyada 3 iyo 2. siday u kala horreeyaan.
Source of image: Pixomondo
" Aniga ahaan, tani waa xilli-ciyaareedkii lixaad, Spindler ayaa sii waday. "Waxaan bilaabay xilli seddexaad. Qaar ka mid ah asxaabteyda halkan waxay ku bilowdeen xilli-labaad. Sidaa darteed waa safar dheer.
"HBO kormeeraha waxyeellada HBO ayaa sidoo kale halkan joogay muddo lix xilli ah, sidaas darteed waan ognahay waxa uu doonayo, waxaana qabaa inaan heysano xiriir shaqo oo wanaagsan. Isgaadhsiintu waa sahlan tahay. Waa wax qaas ah, ogsoonow inaan dhammeeyey ka dib markii aan muddo dheer shaqeyneyno. "
Spindler ayaa bixiyay BGR tusmada guud ee ku saabsan sida Pixomondo - mid ka mid ah bixiyeyaasha VFX ee yar yar ee ku socday helay ku dhowaadba bilawgii - waxay ku biireen aragtida iyo horumarinta jajabka, kuwaas oo aad ku arki kartid ciribtirka fiidiyaha kore ee kor ku xusan.
Filimku wuxuu kugu hagayaa adiga oo u maraya horumarinta wadajirka ah ee jajabka. xilli, muujinaya waxa ku lug leh jilidda, soo bandhigista, sawirada muuqaalka leh ee jilayaasha, hubso in jajabyada muuqaalka leh ee muraayaddu ay iftiimayaan si ay u dhigmaan inta ka harsan goobta ... iyo wixii la mid ah.
Cinjirku wuxuu ku dhamaanayaa mid madow. Jon Snow ayaa u muuqata inuu farsamaynayo farshaxan dusha sare leh, taas oo masraxa masraxa loo soo bandhigi doono si uu u siiyo aragtida ah in tani ay tahay waxa uu ku dhufanayo goobta.
Dhinaciisa, shaqaalaha Pixomondo badanaa waxay marwalba bilaabeen inay la wareegaan HBO oo ku saabsan xilli ciyaareedka soo socda oo ku saabsan midigta ka dib dhammaadkii ugu dambeeyay. Kooxdu waxay heshay mashruuc horudhac ah iyo mashruuc sheeko ah si ay u helaan fikrad ah jihada ficilka. Tani waxay u oggolaaneysaa inay bilaabaan fekerka, xitaa haddii khibradaha gaarka ah ee takhasuska ahi aysan wax badan qaban Karin illaa xilliga cusub uu bilaabmo in la toogto.
Iyo, sida aynu ku yidhi, tani ma aha desktop ah sixir in isbedel erayada meel dawacooyinku ay ku page dhaqdhaqaaq cabsi shaashadda. Saamaynta xirfadlayaasha gaarka ah ee show ah ayaa mararka qaarkood billaabeen inay "dhaqdhaqaaqa" in dawacooyin waa in sameeyaan xubno ka mid ah kooxda Pixomondo lala in a addinba waqti ku xidhay iyo cabsi by xiriirka ay u adeegaan sida film tixraac jilbaha.
Finalkii xilli ciyaareedkii hore ayaa na siiyey mid ka mid ah xilli-ciyaareedkii ugu badnaa ee taxanaha ah illaa iyo hadda, dhimashadii Viserion. computer-ahbaa Bahalka dheer ku dhowaad 30 mitir ahaa "unkayo ​​ama" sidii masduulaa oo baraf ah, si ay awood ugu mugdiga ah ee King Night mahad (iyadoo la kaashanayo Pixomondo), kaas oo muujiyay ku candhuufay iftiin buluug ku filan gebi ahaanba derbiga xukuma baabbi'in. waqooyiga. Tani waxay soo rogeen caqabadaha hor imaad Taageerayaasha adduunka ayaa sugaya inay arkaan waxa dhacaya lixda dhacdo ee ugu dambeysay.
"Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan sheegi lahaa xaqiiqada dhabta ah waxaad u eegi kartaa aduunka dhabta ah ee tixraaca, dhab ahaanna ma jiraan jajab dhab ah oo dunida dhabta ah," ayuu yidhi Spindler . "Laakiin waxaa jira runtii xayawaanka u eg sida jajabka, sida qorrofyada. Waxaa jira muuqaalo badan oo xayawaan ah oo xayawaan ah, halkaas oo aad si dhab ah u arki karto faahfaahin badan oo ku saabsan muuqaalkooda iyo dabeecadahooda. Ku daawashada waxyaabo sidan oo kale ah waa mid waxtar leh. "
Waxa ugu adag waa in la helo isku dheelitirka u dhexeeya xaqiiqda iyo shuruudaha cinwaanka ee qorshe. Marka aad noloshada siinayso jajabyada, weli waa inaad siisaa aragtida ah inay fiirinayaan haddii ay dhab ahaantii halkaas joogeen, ka hor intaan kamarad ah iyo isla goobtii sida jilayaasha, isla xaaladahaas. nalalka. Si arrintan wax looga qabto, Bauer iyo saaxiibkaa mid ka mid ah barta xarkaha ayaa waxay abaabuleen waxa ay ku jiraan qoob-ka-cayaarayaasha masawirada si ay uga caawiyaan sameynta naqshadeynta iyo iftiiminta tallaalka, marka lagu daro siinta waxyaallaha inuu ciyaaro.
Point Pixomondo isticmaali video YouTube muujinaya gorgor qabtay riyo ah sida tixraac goobta ku lug Drogo masduulaagii, ka dib markii dab on riyo ah ku candhuufay iyo sida loo isticmaalo haadeed ay inay haleelaan hor duulaya ah samada.  Si aad fikrad uga hesho kakanaanta iyo baaxadda baahida muuqaalka ee muuqaalka taxanaha, dhacdo xilli-xiga lahaa waxay yeelan doontaa qorshooyin dheeraad ah 1 300 VFX. Inkastoo, marka la barbardhigo, wax yar oo 600 ah oo dhan xilli 2.
Sida aan fileyno inaan ku aragno xilliga 8, oo ku saabsan jeexjeexyada iyo inta kale, Spindler waa xishood. "Waxaan u maleynayaa in wax la mid ah kuwii xilli ciyaareedkii hore runta ahaa waqtigan. Wax walba waa ka weyn, xiiso badan.
"Waxaan qabaa inay hadda muuqato in qaybaha kala duwan ee muuqaalku ay aad isugu dhow yihiin iyo in wax walboo dhammaadaan. Waxaa jiri doona tallaabo fara badan, markaa wax yar ayaa loo baahan yahay marka loo eego waqtiyadii hore. Waxaa jira waxyaabo badan oo aanan aqoon, laakiin wixii aan arkay iyo waxa aan ogahay, haa, waxay noqon doontaa mid xiiso leh. Aniga waxaan ahaa taageere ka mid ah show, sidaas darteed waxay ahayd mid weyn in ay qayb ka mid ah. Xaqiiqdii maaha wax maalin kasta dhaca. "